Imilinganiselo emi-5 yokuSebenza ngokuGqwesileyo | Martech Zone
NgoLwesibini, nge-15 kaDisemba ngo-2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Kwisithuba seminyaka elishumi, siqwalasele ukuSebenza ngokuThengisa kunceda ukubeka esweni nokwenza iinkqubo zokuthengisa ngexesha lokwenyani kwimibutho. Ngelixa usekela-Mongameli ebesebenza kwizicwangciso zexesha elide kunye nokukhula, imisebenzi yokuthengisa yayiyeyona ndlela ibalaseleyo kwaye ibonelela ngobunkokeli bemihla ngemihla kunye nokuqeqesha ukugcina ibhola ihamba. Umahluko phakathi komqeqeshi oyintloko kunye nomqeqeshi ohlaselayo.
Yintoni imisebenzi yokuThengisa?
Ngokufika kweendlela zokuthengisa ze-omnichannel kunye ne-automation yokuthengisa, siyibonile impumelelo kolu shishino ngokulawulwa kwemisebenzi yokuthengisa. Isebe lezentengiso ligcwalisa ngezixhobo ezinamaqhinga, lisebenza ekuphuculeni nasekuveliseni umxholo, amaphulo kunye namanye amanyathelo. Njengoko UNadim Hossein weBrightFunnel Wabhala kunyaka odlulileyo:
Njengoko ukuthengisa kusitya ngakumbi nangakumbi kumjikelo wentengiso, obu buchwephesha busembindini. Kwaye oku kuthetha ukuba imisebenzi yokuthengisa iba yindima ethe kratya yokuzibeka kwinqanaba lokuthengisa kubahlalutyi kunye nokwenza izigqibo namaqhinga okuvelisa ingeniso.
UDavid Crane kunye neqela lokudibanisa badibanisa le infographic emnandi, Imisebenzi yokuThengisa uMdlalo weZakhono, kwimilinganiselo emi-5 ebaluleke kakhulu eqinisekisa ukuthengiswa kokusebenza ngokugqwesileyo.
Yintoni eyenza ukuba imisebenzi yokuThengisa iphumelele?
Ukulungelelaniswa kweNtengiso Imisebenzi yokuthengisa kufuneka isebenzisane ngokusondeleyo nawo onke amaqela akufutshane aqinisekise ukulawula izixhobo kunye netekhnoloji eqhuba ukuthengisa kunye nolungelelwaniso lwentengiso. Kuphela yi-24% yabathengisi abathi kukho intsebenziswano elungileyo phakathi kwentengiso kunye nentengiso.
Ukuhlanganiswa kweenkqubo -Imisebenzi yokuThengisa iqinisekisa zonke iinkqubo kunye nezixhobo ezichaphazelekayo ziya kuphucula unxibelelwano lwabathengi. Ndingongeza ukuba injongo kufuneka ibe ngumbono omnye womthengi ekwabelwana ngaye. Kuphela yi-33% yeenkampani ezisebenzisa #CRM kunye noThengiso #Automation abathi ezi zidibene kakuhle.
Umgangatho weDatha -Imisebenzi yokuThengisa kufuneka ikhuthalele indlela yayo kucoceko lwedatha kunye nokusetyenziswa kombutho ngokubanzi. I-25% yolwazi lwentengiso lwe-B2B aluchanekanga kwaye i-60% yeenkampani zinedatha engathembekanga.
Velocity ekhokelayo -Umsebenzi weNtengiso uhlawuliswa ngamaqela athengisa izixhobo kunye nedatha efunekayo ukulungiselela amathemba ngokukhawuleza. I-30 ukuya kwi-50% yentengiso iya kumthengisi ophendula kuqala.
Imilinganiselo kunye nohlalutyo -Njengoko itekhnoloji yentengiso isanda, idatha ethe kratya iya kuqhutywa kumbutho. Oku kuyakufuna umntu oququzelela ukuqonda kombutho ngokusebenza. Ukuthengisa kubahlalutyi Uqingqo-mali luqikelelwa ukuba luyonyusa i-84% kwiminyaka emi-3 ezayo.
tags: mgangatho wedathaiqhingakhokelela velocityulungelelwaniso lwentengisoUhlalutyo lokuthengisaukugqwesa kwezentengisoumlinganiselo wentengisoimisebenzi yentengisoimisebenzi yokuthengisa egqwesileyoii-ops zentengisoukugqwesa ops ukugqwesaintengisoulungelelwaniso lokuthengisaukudityaniswa kwenkquboiinkqubo zokudibanisa